Mahajanga: Mijojo ny orana, mitombo isa ireo traboina noho ny rano miakatra
samedi, 04 janvier 2020 10:16
Tanàna maromaro amin’ny toerana iva eto an-drenivohitry ny faritra Boeny no misedra fahasahiranana vokatry ny fiakaran’ny rano nateraky ny orana nijojo efa andro vitsivitsy izao. Miditra an-trano ny rano, tonga hatreny ambany helika amin’ny toerana sasany.
Miara-misalahy ireo herivelona eto an-toerana manavotra ireo traboina hiala amin’ny toerany, ka mametraka azy ireo amin’ny toerana voatokana toy ny ao amin’ny EPP Fiofio. Nandray anjara tamin’izany ny Zandary sy ny Miaramila.
Nanampy izay vitany ihany koa ny Filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena, ny Solombavam-bahoaka Rahantanirina Lalao fantatry ny maro hoe Nina.
Tsy mitsaha-mitombo isa ireo traboina. Hatry ny omaly hariva dia tokatrano miisa 237 no nafindra eny amin’ny EPP Fiofio izay ahitana olona 1515.
Voatery notapahana ny herinaratra tao Fiofio sy Tsararano araka ny fangatahan’ny solotenam-panjakana tany amin’ny Jirama mba hisorohana ny loza ateraky ny fiakaran'ny rano be loatra tamin’ireo toerana ireo.